Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiil Tigree Iyo Oromo ah Oo Isku Laayey Gudaha Magaalada Qabridahar Ee Xarunta Gobolka Qoraxay..
Saraakiil Tigree Iyo Oromo ah Oo Isku Laayey Gudaha Magaalada Qabridahar Ee Xarunta Gobolka Qoraxay..
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Qabridahar ee Xarunta gobolka Qoraxay ayaa sheegaya dhacdo lagu farxo oo ka dhex dhacday saraakiisha gumaysiga Ethiopia ee kusugan magaalada Qabridahar.
28 July 2015 oo ahayd xilii uu Madaxwaynaha Maraykanka Obama booqashada xaaraanta ah ku joogay dalka Ethiopia, ayaa mid kamid ah khubadihii uu kajeediye kulamadii uu la qaadanayey saraakiisha xukuumada Ethiopia waxaa si toos ah looga daawaynayey Tv-ga fidiya dacaayadaha beenta ah ee wayaanaha.
Koox saraakiil ah oo kamid ah kuwa magaalada Qabridahar oo daawyaney Tv-ga ayaa waxaa dhex maray muran xoogan oo kusaabsan khubadii Obama, gaar ahaa markii uu ka hadlayey Dimuquraadiyada dalka Ethiopia iyo sida ay xukuumada wayaanuhu ugu tomato xuquuqda aadanaha.
Sargaal kamid ah kuwa Tigreega ee kusugnaa xarunta lagu daawayney Tv-ga ayaa goobtii ka sheegay in khubada Obama aysan wax macno ah ku fadhiyin dalka Ethiopiana ay iyagu say rabaan kayeelayaan,Xukunkana ay ku qabsadeen qori loogana qaadi karo oo kaliya qori caaradii.
Arintaasi ayaa waxaa ka cadhooday sargaal Oromo ah oo goobta ka sheegay in loo baahan yahay in dadka laga daayo dhibaatada iyo laynta, xukunkana uu noqdo mid wadaag ah.
Sargaalkii Tigreega ahaa ayaa ugu jawaabay “Oromadu waa xawayaanka Ethiopianka ee iska aamus angaa idin lehe” Hadlkaaasi waxaa dhibsaday sargaakii Oromada ahaa waxaa uuna doontay qori.
Daqiiqado kadib waxaa goobta kusoo laabtay sargaalkii oo wata qori, waxa uuna rasaas kufuray saraakiishii Tigreega ahayd ee uu muranku dhexmaray.
Rasaasta oo haleeshay shan sargaal oo Tigree ah ayaa isla goobta waxaa ku nafbaxay laba kamid ah, halka dhaawac halis ahna uusoo gaadhay saddex kale kuwaasi oo loola cararay goobaha caafimaadka.
Sargaalkii Oromada ahaa ee falkaasi sameeyey waxa uu kacararay goobtii waxa uuna galay saldhiga Police-ka degmada.
Waxyar kadib waxaa ka daba tagay ciidan Tigree ah waxaana goobtii ka dhacay dagaal laba saf ah oo dhex maray Tigree iyo Oromo waxaana goobtii lagu dilay Afar Sargaal oo Oromo ah oo difaacayey sargaalka falaka Fuliyey.
Dhacdadan oo kamid ah dhacdooyinka ugu yaryar ahaa tilmaamaysa heerka ay kala taagan yihiin saraakiisha wayaanaha ee kasoo kala jeeda qoomiyadaha kala duwan.
Xafiiska Warqabadaka ONA, Nairoib-Kenya.